को हुन् सिस्टर निर्मला ?
मदर टेरेशाको उत्तराधिकारी सिष्टर निर्मलाको २३ जुन २०१५मा भारतको कलकत्तामा निधन भएको छ । सन् १९३४ जुलाइ २३ मा नेपालको स्याङ्गजा जिल्लामा जन्मिएकी उनी १७ बर्षको उमेरमा नेपालबाट भारत गै मदर टेरेसासंगै काम गर्न थालेकी थिइन । सिस्टर निर्मला मदर टेरेशाको मृत्यु पश्चात उनको उत्तराधिकारीको रुपमा मिसनरिज अफ च्यारिटी नामक संस्थाको प्रमुखको रुपमा काम गर्दै आएकी थिइन ।
1 उर्लदो सय करोड अभियान 'वान बिलियन राइजिङ'
2 विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा
3 ३६ औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस
4 ICC (International Cricket Council)
5 एउटा किताब साक्षरता अभियान –२०१५
6 Goal Line Technology (GLT) भनेको के हो ?
7 Career News and Info जेठ २, २०७४
9 Career News and Info भाद्र ७, २०७४
10 रेन स्याडो (Rain Shadow) सम्बन्धी जानकारी